Cishe wonke umuntu, ngisho nalabo babengazange bahlanganyele stock yokuhweba, kungenzeka nazo into ezifana nesilinganiso. Kodwa akubona bonke abantu ukuthi uyazibuza: "Kuyini Imajini" Lokhu zamagama, siguqule elifanayo isiNgisi ( "Imajini") kanye isiFulentshi ( "Marge") nezinhlangano zolimi kusho onqenqemeni noma ikhasi wekhasi, wasungula eside ekhethekile iye kabanzi umshwalense kanye yasebhange, kanye ukuhweba (kuhlanganise exchange).
Ngo classical umqondo wekhasi yayo umehluko phakathi intengo (kubita) futhi intengo ukuthenga noma ukuthengisa. Ngamanye amazwi - akulutho efana inzuzo etholwe abahwebi ngenxa umehluko yentengo, noma bathengise noma iyiphi impahla engokoqobo noma ukuvikeleka, kuhlanganise nemali. Kuye isicelo, ohlangothini kungaba credit, yibhange noma asekelwe. Ukuze ukuhlola inzuzo inzuzo amabhizinisi 'kusukela iphuzu kwezomnotho umbono, kukhona into efana nesilinganiso kwezohwebo, ngokuvamile wezwakalisa njengoba amaphesenti.
A incazelo ukuhluka inikezwe ethemini ku Forex emakethe. Labo abathanda yokuhweba umehluko amanani, cishe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa uhlangene lo mqondo. Ngakho, liyini margin forex? Kulokhu, it is a idiphozi noma, ngokunembile, idiphozi edingekayo ukuze uvule isikhundla emakethe exchange angaphandle. Noma, ngamanye amazwi, ingxenye imali abadayisi sika-akhawunti kufanele kusetshenziswe njengoncedo yesibambiso idiphozi. Ngoba umthengisi lwemali ayibalulekile kuphela ukwazi ukuthi yini ohlangothini, kodwa futhi ukwazi ukuthi ukubala. Ubukhulu bale wekhasi incike ubukhulu eziningi futhi asizakale. Ukuze izingcaphuno eziqondile kumelwe abe ukubaluleka lot yahlukaniswa asizakale. Ngokwesibonelo, uma unayo asizakale 1: 200 futhi ukuhweba okuningi kungenxa 10,000 USD, ohlangothini kuyoba 10000/200 = 200 USD. Uma i-akhawunti iklayenti kuyinto $ 1,000, anawo abadayisi ngesikhathi eye $ 800 futhi $ 200 zivaliwe, njengoba isiqinisekiso ukumboza ukulahlekelwa uma deal waya endaweni okungeyiyo, okuyinto ayefisa. Lokho sika lokho wekhasi le Forex emakethe.
Wekhasi Ukuhweba okungukuthi ezikhangayo nokuhwebelana izikhungo umnikelo le sevisi, futhi abatshalizimali ngokwabo, ngoba ikuvumela ukuba evulekile izikhundla by isamba izikhathi eziningana mkhulu kunezinhliziyo ubukhulu idiphozi. Ngokwesibonelo, nge-akhawunti ye-kuphela $ 100 nge asizakale 1:50, isivele kungenzeka ukuthengisa inani $ 5,000. Lapha-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi asizakale kakhulu akuyona kakhulu kuphela kuthuthukisa ikhono lokuthenga, kodwa kuhlobene nokuba nezinduna kwengozi futhi kungaba ngokoqobo ukubhubhisa isikolo sakho, njengoba lapho ngidayisa nge okukhulu asizakale inyuka inzuzo nje kuphela kodwa futhi ukulahlekelwa. Ukuze ugweme lokhu, endabeni kunokushoda kwezimali ukuze zigcine indawo evulekile lwamanje, abadayisi ithola "wekhasi ucingo" (ucingo margin) - uhlobo isaziso isidingo imali eyengeziwe ukuze kulondolozwe sikhundla evulekile, kungenjalo kukhona ophoqelelwe Ukuvalwa yayo - kwabangela okuthiwa " ayeke ukuphuma "(ayeke ukuphuma).
ukuliqonda ngokunembile lokho asizakale kuphela nokuthi yini wekhasi, ngingakwazi ukuthuthukisa inzuzo ukuhweba at the aphansi sengcupheni.
Inqubomgomo Imali: izici jikelele
Iyini inzuzo? inzuzo isakhiwo, ukuhlela yayo, ukwabiwa kanye nokusetshenziswa ezimweni ezimakethe